Amụma Nzuzo Mgbasa Ozi
Iwu ojiji data Iwu a na-akọwa ozi anyị chọrọ ịhazi iji kwado mgbasa ozi. Kedu ụdị ozi anyị na-anakọta? Iji nye ngwaahịa anyị, anyị ga-edozi ozi gbasara gị. Ofdị ozi anyị na-anakọta dabere n'otú i si eji ngwaahịa anyị. I nwere ike ịmụta otú ...
Gịnị Bụ Izu Oyi?
site ha na 19-08-08
Teknụzụ Cold stamping na-atụnyere ọdịnala nke Hot Stamping abụọ nke nwere ike iru nsonaazụ obibi amamiihe nke stampụ. Ihe dị iche n’etiti ha bụ na stampụ oyi anaghị achọ kpo oku mgbe eji ya. Nke ahụ bụ akụkọ oyi stampi ...
Emere 7th China International All-India Exhibition nke ọma
site ha na 18-10-29
On October 28 2018 na 7th China International All-India ngosi ihe ịga nke ọma kwubiri na Shanghai. Site n’isiokwu nke “imepe oge nke ibiputa ọgụgụ isi” ihe ngosi nke afọ a nile n’ile gosiputara ihe nkwalite na usoro mmepe nke teknụzụ ibipụta na ...
Kingfisher Labels wụnye asaa Edale flexo pịa
site ha na 18-10-11
Kingfisher Labels nke dị na Yate north Bristol dị na UK azụtala Edale FL3 nke asaa akwụkwọ mgbasa ozi si n'aka ndị na-emepụta ngwa ọrụ UK. Mpempe Kingfisher na-enye nri ịchọ mma na nlekọta ahụike yana akara mmado nke onwe. O wunye Edale flexo nke mbu ya na 2001. Igwe ohuru ohuru ya ...
Kekọrịta ndi mbipụta akwụkwọ na ndị asọmpi Fairfax mechiri ụlọ obibi akwụkwọ abụọ
Dika nkwekorita ya na ndorondoro News Corp iji kesaa ihe eji ebiputa ya na July nke afo a onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke Australia bu Fairfax emechila ulo oru abuo abuo na Queensland na NSW ma na-ere ahịa. Otu n'ime ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ dị na Ormiston 25 km site na etiti ụgbọ ala Brisbane ...
Prati USA họpụtara onye njikwa
site ha na 18-09-18
Prati akpọwo Frank Hasselberg dị ka onye ga-eduga enyemaka ọhụrụ ya na North America. E guzobere Prati USA ka ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ime ka mkpebi ya maka ahịa na North America sie ike. Hasselberg na Kocher + Beck Heidelberg na Gallus rụburu ọrụ na North America ...
Parkside na-etinye ego ọzọ na ntinye laser
Parkside ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa pụrụ iche etinyela nnukwu ego na ngwa ngwa ngwa laser iji mepụta ohere azụmaahịa ọhụụ. Ngwunye ego laser ọhụrụ ya na-enyere akara laser gafee akụkụ abụọ nke otu ihe nkiri ma ọ bụ laminate iji mepụta ihe dị mfe ma meghee mkpọpụta ...
Avery Dennison weputara ihe ndi ozo nke PET na Europe
site ha na 18-08-30
Avery Dennison ekwuola na ya bụ onye nrụpụta ihe nrụpụta izizi na-ebute iwebata iwebata ihe edere na PET (rPET) recycled na Europe. Ihe eji eme rPET ohuru jiri ihe eji ahoputa ihe ndi choro iji zụta ya ma gosiputa ya na October 2018 gafere otutu njide onwe gi ...
Kodak na-ere nkewa nkwakọ ngwaahịa mgbanwe
site ha na 18-08-16
Kodak ga-ere nkewa nkwakọ ngwaahịa mgbanwe nke na-enye ya ohere ilekwasị anya na sọftụwia gburugburu ebe obibi sọftụwia sọftụwia na ikikere ikike. Nkewa ahụ na-emepụta ma na-ere Flexcel NX sistemụ nke igwe ihe eji eme ka ihe na-eme ka ihe na-emepụta ihe na ihe ndị yiri ya ...
Amcor nwetara onye osompi Bemis ka ọ daa na NASDAQ
site ha na 18-08-08
Industrylọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-eche ọtụtụ nsogbu ihu n'ihi ihe ndị na-ebili. Dịka otu n'ime ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa n'elu ụwa Amcor (ASX: AMC) ka ya na onye na-asọ mpi US bụ Bemis gbara izu ihe karịrị otu afọ ma na-achọ iru nkwekọrịta iji nweta ụlọ ọrụ ahụ maka ijeri $ 7 nke bụ e ...
Inovar Nkwakọ ngwaahịa na-enweta Topp Labels
Inovar Nkwakọ ngwaahịa enwetara Topp Labels na-eme ka ikike ya nwee ike ijere ahịa ndị dị na Florida na ndịda ọwụwa anyanwụ US ozi. Isi ụlọ ọrụ dị na Dallas Texas Inovar bụ onye na-atụgharị ọpụrụiche nke aha njirimara na-eme ka uwe aka na ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe. Ọ na-eje ozi ndị ahịa na-acha anụnụ anụnụ n'ime mmiri na-agba mmiri ...
NPA NDCMỌD MA MAERSKLINE NA AKW LKWỌ IWU Atọ ndị ọzọ
Dịka akụkụ nke mbọ iji dozie ngagharị iwe nke ndị ọkwọ ụgbọ ala na Lagos Port Complex (LPC) na Tin Can Island Port (TCIP) Lagos, thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdụ Nigeriangbọ Mmiri nke Nigeria (NPA) ekwuputala nkwụsịtụ ụbọchị iri nke ọrụ nke Companlọ Ọrụ Mbupu anọ na nke mbụ. Ihe metụtara Mbupu Comp ...
polyester ihe nkiri, okpomọkụ lamination film, Ihe eji ekpo ọkụ, Hot Foil, Hot Foil zọ, ndị na-emepụta ihe nkiri bopp metallized,